Sajhasabal.com | Homeनक्कली भनेर किनेको हिराको औंठीले जब एकाएक करोडपति बनायो !
नक्कली भनेर किनेको हिराको औंठीले जब एकाएक करोडपति बनायो !
एउटी बेलायती महिलाको हिरा लगाउने इच्छा थियो । तर उनीसँग हिरा किन्नको लागि पर्याप्त पैसा थिएन । हिरा लगाउने आफ्नो चाहनालाई मेट्नकै लागि भएपनि उनले बजारमा गएर हिराजस्तै देखिने नक्कली हिराको औंठी किनिन् ।
३३ वर्षसम्म उनले लगातार त्यो औंठी लगाइरहिन् । ३३ वर्षपछि उनले जब त्यो औंठीको वास्तविकता थाहा पाइन्, त्यतिबेला उनी चकित भइन् । त्यो नक्कली हिराको औंठीले उनलाई रातारात करोडपति बनाइदियो ।
ती महिलाले बताएअनुसार ३३ वर्षपहिले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न उनले बजारबाट हिराजस्तै देखिने ‘नक्कली’ औंठी किनेकी थिइन् । त्यतिबेला त्यसको मूल्य नेपाली १ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ परेको उनले बताएकी छिन् । तर पछि उनले खै के सोचिन्, आफूले ३३ वर्षसम्म लगाएको औंठी बेच्ने निर्णय गरिन् ।
उनी त्यो औंठी बेच्नको लागि एक हिरा व्यापारी ठाउँ गइन् । व्यापारीले बेच्नुको कारण सोध्दा, उनले औंठीमा लगाइएको हिरा नक्कली भएको र आफूले बेच्न खोजेको भनेपछि हिरा व्यापारी तीनछक परे ।
व्यापारीले यो सक्कली हिराको औंठी हो भनेर हेरेर थाहा पाइहाले। उनले सम्झाउँदै ती महिलालाई यो नक्कली नभएर सक्कली हिराको औंठी भएको बताए । यो कुरा सुनेर ती महिलालाई विश्वास नै भएन । उनले बताएकी छिन्, ‘व्यापारीको त्यो कुरा सुनेर मलाई चक्कर आउन थाल्यो, आफैलाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ ।’
उनीहरुको सल्लाह अनुसार उनले त्यो औंठीलाई लिलाम बिक्रीमा राखिन् । अन्त्यमा ९ करोड रुपैयाँमा यसको लिलाम भयो । तर सबै कर काटेर ती महिलाले भने सात करोड रुपैयाँ पाइन् । ३३ वर्षअगाडि नक्कली भनेर किनेको हिराको औंठीले उनलाई करोडपति बनायो ।